Yan Aung: ပရဟိတ ဘလော့ဂါများ အလိုရှိပါသည်…...
ကျွန်တော့်မှာ ဘလော့ဂ်တွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ တစ်ချို့သိမှာပါ. တစ်ချို့ဘလော့ဂ်လေးတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ စတင်ခဲ့ပေမယ့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့် ထင်သလောက် မအောင်မြင်မပေါက်မြောက်တော့တာလေးတွေ တွေ့နေရပါတယ်.
အောင်မြင်မှုဆိုတာ ရရှိဖို့ထက် ရေရှည် တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့က ပိုခက်တယ်မဟုတ်လား. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တာဝန်ယူရေးသားနေတဲ့ ဒီဘလော့ဂ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် အကူအညီပေးနိုင်မယ့် ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများကို ထပ်မံအင်အားဖြည့်တင်းသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်.
ဒါတွေကတော့ လောလောဆယ် ကျွန်တော်စတင်ပြီး ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ချင်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေပါပဲ. ကျန်တာတွေကိုတော့ နောက်တစ်သုတ်ကျမှပဲ ရှင်းပြပါတော့မယ်.
(၂) သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများ
(၄) English4success ဘလော့ဂ်
သံစဉ်လှိုင်းက သီချင်းလေးတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ပါ. အွန်လိုင်းမှာ သီချင်း ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ဝေမျှ နားဆင်ခံစားနိုင်ဖို့ကျတော့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တတ်မှု လိုလာပြီလေ. အဲဒါလေးကို ဖြည့်စွမ်းပေးတဲ့ အနေနဲ့ သံစဉ်လှိုင်းကို ဖန်တီးခဲ့တာပါ. စတင်ဖန်တီးခဲ့စဉ်က youtube website ထဲက မြန်မာသီချင်းတွေကို ရွေးတင်ခဲ့ပေမယ့် ပြည်တွင်းက ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ youtube ကို ၀င်လို့မရတာကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ hotlink အနေနဲ့ပဲ တင်ပေးပြီး တိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်အောင်၊ right click ခေါက်ပြီး download တစ်ခါတည်း လုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်.
သံစဉ်လှိုင်းမှာ ၀င်ရောက်ရေးသားနေတဲ့ ဘလော့ဂါများဟာ မိမိတို့မှာ ရှိတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးများကို လာပြီး share လုပ်ပေးနေကြတာပါ. ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မမျှော်ကိုးကြပါဘူး. လာရောက်လည်ပတ်ကြသူတွေ အပန်းဖြေ အနားယူနိုင်ပါစေတော့ ဆိုတဲ့ စေတနာသက်သက်နဲ့ ကူညီပေးနေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
လူတိုင်းမှာ သီချင်းလေးတွေတော့ ရှိကြမှာပါပဲ. အဲဒါလေးတွေကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း နားဆင်ရုံသာမက တစ်ခြားသူတွေကိုပါ ဝေမျှပေးနိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘလော့ဂါလောကကြီး ဘယ်လောက်သာယာပြည့်စုံလိုက်လိမ့်မလဲဗျာ.
လုပ်ရမှာက လွယ်လွယ်လေးပါပဲ. ဆီဘောက်စ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်. ကျွန်တော့်ကိုပဲ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး ဖြစ်ဖြစ် Email address လေးတွေ ထားခဲ့ကြပါ. ကျွန်တော် invite လုပ်လိုက်ပါမယ်. Accept လုပ်ပြီးရင် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ သီချင်းလေးများကို upload လုပ်နိုင်ပါပြီ.
ကဲ. သံစဉ်လှိုင်းအကြောင်း ရှင်းပါပြီနော်. အဖွဲ့ဝင်အသစ်လေးတွေကို မျှော်နေပါမယ် ခင်ဗျာ…
ဒီဘလော့ဂ်လေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ရက်စွဲတွေကို နောင်လာနောက်သား လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေ သတိရနေစေဖို့၊ သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို သတိမူမိစေဖို့၊ နိုင်ငံရေး လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားမှုတွေကို စုစုစည်းစည်းနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ဖန်တီးထားတာပါ.
နိုင်ငံရေးအသိအမြင် နိုးကြားတက်ကြွတဲ့ မည်သူကို မဆို နွေးထွေးပျူငှာစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်. ခုနက ပြောခဲ့သလိုပါပဲ. Email address လေးများကို သက်ဆိုင်ရာ ဘလော့ဂ်ရဲ့ ဆီဘောက်စ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော့်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး ဖြစ်ဖြစ် ကူညီရေးသားပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်.
ဒီဘလော့ဂ်လေးကတော့ တက်သစ်စ မြန်မာဘလော့ဂါလေးများ ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကူအညီရနိုင်စေဖို့ ဖန်တီးထားခဲ့တာပါ. အောင်မြင်သင့်သလောက် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်. ဒီဘလော့ဂ်လေးမှာ အခုဆိုရင် wordpress platform နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေကိုပါ ထည့်သွင်းသွားနိုင်ဖို့ အင်အားဖြည့်တင်းတိုးချဲ့နေပါပြီ.
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို ဝေငှလိုတဲ့ မည်သူကိုမဆို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
ဒီဘလော့ဂ်လေးအတွက် နောက်ထပ်ကူညီနိုင်တာ တစ်ခုကတော့ မိမိကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးသားနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ရင်တောင်မှ မိမိဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အသုံးဝင်မယ့် လင့်ခ်လေးတွေကို ပြောပြနိုင်ပါတယ်. Helpdesk အဖွဲ့သားများက လိုက်လံရှာဖွေပြီး ဘာသာပြန်ဆို ရေးသားပေးသွားပါမယ်.
ဒါလေးကိုတော့ မကြာသေးခင်ကမှ စတင်ထားခဲ့တာပါ. မြန်မာလူငယ်တွေ English စာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်.
ဒီသင်ကြားရေး အဖွဲ့အင်အားကို တိုးချဲ့နေဆဲပါပဲ. ဘလော့ဂ်လေးကို သွားလည်ပြီး purpose ကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်. ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်သွားမယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်နားလည်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ ကူညီပေးနိုင်မယ် ထင်တဲ့ အရာလေးများကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်. ကိုယ်တိုင်ဝင်ရေးလို့လည်း ရပါတယ်.
ကျွန်တော်လည်း အချိန်ကို ရအောင်ယူပြီး အထက်ပါဘလော့ဂ်လေးတွေရဲ့ နည်းပညာပိုင်းကို တာဝန်ယူသွားပါမယ်. ဘလော့ဂ်တွေ အားလုံးကို တန်းပလိတ်ကအစ ပြန်လည်မွမ်းမံသွားပါမယ်.
ကဲ… အားလုံးပဲ. ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ.
ကျနော်ကတော့ Eng နဲ့ Blogger Help Desk ကို ၀ိုင်းပါမယ်ဗျာ။ သမိုင်းထဲက နေ့စွဲများကိုတော့ ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ကူနိုင်၏ မကူနိုင်၏
ဒီလ ကုန်စာမေးပွဲပြီးရင် အင်္ဂလိပ်စာ blog နဲ့ သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများမှာ ပါဝင်ပါရစေဗျို့ ။ Blogger Help desk မှာတော့ ဖြည်းဖြည်းမှပဲ ပါဝင်တော့မယ်ဗျာ။
Test ပြီးရင် လာခဲ့မယ်ဗျို့.. ကိုရန်အောင်ရေ...
အကိုရေ...ဘာမှတော့ မတတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် သမိုင်းထဲကနေ့ စွဲများကိုတော့ ဝိုင်းကူချင်တယ်။အဲဒါကလက်ရှိညီလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေလို့ ပါ။